Taliyaha booliiska gobolka Nugaal oo shaqada laga ceyrshay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandTaliyaha booliiska gobolka Nugaal oo shaqada laga ceyrshay
Taliyaha booliiska gobolka Nugaal Faarax Galangooli. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa shaqada ka ceyriyay taliyaha booliiska gobolka Nugaal Faarax Galangooli, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday xafiiska madaxtooyada maanta oo Isniin ah.
Madaxweynaha ayaa si kumeelgaar Janaraal Muxiyadiin Axmed Muuse ugu magaacabay taliyaha booliiska gobolka Nugaal, sida lagu sheegay digreetada.
Waa masuulkii labaad oo katirsan gobolka Nugaal oo uu madaxweynuhu xilka ka qaado maanta. Guddoomiyihii gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faroweyne ayaa xilka laga qaaday.
Madaxweyne Farmaajo oo si kumeel gaar ah u xanibay dhammaan akoonada ay haayadaha dowladda ku leeyihiin bangiga dhexe iyo bangiyada gaarka ah
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha cusb ee Soomaaliya ayaa si kumeel gaar ah u joojiyay lacag kala bixida dhammaan akoonada haayadaha dowladda ilaa iyo inta laga soo dhisi doono golaha wasiirada, sida ay sheegeen ilo-wareedyo. Ilo-wareedyada ayaa [...]